UTau uqine idolo ngokuzibekisela indawo kwi-Afcon - Impempe
UTau uqine idolo ngokuzibekisela indawo kwi-Afcon
March 24, 2021 March 24, 2021 Impempe.com
UPercy Tau nabanye ozakwabo kwiBafana Bafana kumele baqine koweGhana
Umdlalo wokuhlungela i-Africa Cup of Nations (Afcon), weNingizimu Afrika neGhana, iwona ozocacisa ukuthi iqembu lakuleli liyazibekisela yini indawo kweyamanqamu eCameroon ngonyaka ozayo.
Lo mdlalo uzokuba ngoLwesine eFNB Stadium ngo-6 ntambama. IBafana Bafana isendaweni yesibili kuGroup C ngemuva kweSudan neGhana. Womathathu amaqembu anamaphuzu ayisishiyagalolunye. Lokhu kuchaza ukuthi iBafana Bafana isethubeni elihle lokuqhwakela uma ingashaya iGhana ngoLwesine. Ngemuva kwalokho izovakashela iSudan ekuhambeni ngempelasonto. Amaqembu amabili azoqeda phezulu yiwona azozibekisela indawo kwi-Afcon.
Umgadli weBafana, uPercy Tau, uthe iqembu liyakuqonda ukuthi imidlalo emibili yokuhlunga elizoyidlala neGhana neSudan, inzima kodwa unethemba lokuthi abafana bazokwenza okufanele. UTau uthe njengoba kusele imidlalo emibili kukhulu abasangakwenza
“Sonke siyazi ukuthi uma kukhona oshaywayo omunye awine. lo owinile uzibeka ebuhleni bokuya kwi-Afcon. Kodwa ngiqine idolo ukuthi sizosebenza kanzima bese sithole imiphumela efanele. Sifuna nokusebenzisa ukuthi sizobe sidlalela ekhaya neGhana, bese senze kangcono kunendlela esenze ngayo ekuhambeni.
“Siwabukile ama-video omdlalo lapho sishaywe khona ngo 2-0, siyaqonda ukuthi yikuphi lapho siphambuke khona. Sithemba ukuthi sisesimeni esikahle somqondo futhi sizokwenza kahle,” kusho uTau.
UTau uthe yize abantu becabanga ukuthi iqembu lizoya kulo mdlalo linengcindezi kodwa abafana baphapheme kodwa babeke umoya phansi.
“Sesike saba ezimeni ezifana nalezi kaningi, futhi inhloso yethu ukwenza kahle nokuzibekisela indawo kwi-Afcon,” kusho uTau egcizelela ukuthi kungakuhle baqede manje ngokuzibekisela indawo kwi-Afcon.
Nokho ubuye wathi uma kumele baye emdlalweni wokugcina bedinga ukuzibekisela indawo akunankinga, into ebalulekile ukuthi iqembu nezwe lizibekisele indawo kwi-Afcon. UTau uthe akanayo ingcindezi ukuthwala amathemba esizwe emahlombe akhe.
“Cha, ngikholwa ukuthi konke esifuna ukukwenza, kumele sikwenze ngokubambisana. Uma nginikwe umsebenzi ngiwenza ngokubambisana nozakwethu. Sonke siyazibophezela ukuzama ukusiza iqembu lizibekisele indawo kwi-Afcon. Ingcindezi eyethu sonke kodwa okubaluleke kunakho konke ukuthi sizibekisele indawo,” kugcizelela uTau.
Lo mgadli uthe uzizwa ekhethekile ngokwesekwa akuthola eMzansi, e-Afrika nasemhlabeni wonke selokhu aya e-Europe.
“Ngikujabulela kakhulu ukwesekwa yibona futhi kumele baqhubeke nokwenza lokho ngothando. Ngithanda ukucela wonke umuntu ukuthi aphephe kulesi sikhathi esinzima segciwane (icoronavirus), bazigcine bephilile. Laba ngabantu abasenza lokhu esiyikhona, futhi ngiyabonga kakhulu ngothando lwabo. Ngiyajabula ukuthi umsebenzi wami ubenza babe nokuziqhenya ngami,” kuphetha uTau.
Ezakamuva, Ibhola lomhlaba, Uncategorized
Previous Previous post: Ziphazanyiswe yiCovid izinhlelo zikaNotoane olungiselela ama-Olympics
Next Next post: BUKA!: Owayedlalela iGhana usabisa iBafana ngesibhaxu